Bembero : Sekuru's Stories Bembero : Sekuru's Stories
Varidzi ndeveMhuri YeKwaChigamba
Ndichayeuka kuti pandacomposa Bembero vadzimai vangu vakanditi ivo, “Ah, ruchiri rumbo rwembira here irwo urwurwu?” Ndikati, “Irwo runoita chete! Rumbo rwembira.” Zvikanzi, “Ha, muchasekwa nevanhu.” Zvino ndainge ndichinyara kuridza manje, nokuti vakati ndichasekwa nevanhu.
Ndobva ndaenda kuChitungiwa, ndobva ndanoridza. Hatina kumboridza rumwe rumbo kunze kwerworwo, Bembero. Usiku wese, “Dzokororai chete. Dzokororai, dzokororai, dzokororai!” Vakazoona kuti, “Ah, zvechokwadi rumbo rwembira, runofarirwa chaizvo!”
Tiri kwaAmai Donnie kuya kuya, tikaridza Bembero, kana midzimu yacho yaitamba zvimwe izvizvi, zvisinganzwizisike. Ndikati, “Ha, matambiro iwaya!” Nokuti munhu asina mudzimu haupinde imomo kutamba. Ehe, haumbopinda kutamba! Vaitamba zvesimba zviya, zvekupembera zviya zviya.
Ndobva ndikazoti, “Aiwa, rinofanira kunzi Bembero nokuti vanhu vanobva vapembera.” Ndobva VaChihoro vakati, “Ehe, zvechokwadi rumbo ruye ruye runonakidza.” Ndikati, “Mazvionaka, runonakidza!” Zvikanzi, “Ah, runonakidza.”
Bembero handaimboziva kuti rungasvike ipapo, asi kana patikarecorda takarecorda Bembero neNgozi Yemuroora, rakaita gore rese riri patop twenty. Saka ndopandikaita Bembero.